Polonina: Ampitsikio ny Ankizy! – Mora ny Manao Izany! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Mey 2017 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, русский, Nederlands, polski, Español, Italiano, македонски, Français, English
(Marihina fa tamin'ny 15 Martsa 2010 no nivoaka ny lahatsoratra teny anglisy)
Mpilatsaka an-tsitrapo mavitrika hatrany i Tomek (24 taona) sy Weronika (18 taona). Niara-niasa tamin'ireo mana-kilema sy nikarakara hetsika fanasoavana isan-karazany ary nanampy ny foibe fikarakarana ireo marary mafy izy ireo na dia mbola tanora tokoa aza . Manoratra bilaogy ihany koa i Tomek, izay manome fanazavana feno momba ny fomba, ny toerana ary ny olona izay tokony hanome fanampiana raha te hanao mpilatsaka an-tsitrapo ianao.
Tamin'ny taona 2009, nihaona ary nanomboka ny Dream Mail ireto tanora roa ireto, fanentanana asa fanasoavana izay mampiroborobo ny fanoratana taratasy sy ny karatra paostaly ho an'ireo ankizy marary mafy. Tena tsotra kely ilay hevitra, havoaka ao amin'ny tranonkala miaraka amin'ny mombamomba azy ireo amin'ny antsipirihany ny sarin'ireo ankizy sy ny tantaran'ny aretina. Maka penina ary manoratra teny vitsivitsy ho azy ireo ny zavatra ataonao. Mety ho toy ny zavatra kely sy tsy misy dikany izany kanefa ho an'ireo ankizy izay matetika mijanona ao an-trano isan'andro dia hampamirapiratra ny andron'izy ireo ny karatra paostaly. Mahatsapa izy ireo fa misy olona tsara fanahy any ivelany any izay mampitsiky ny endriky ny ankizy ary mampanadino azy ireo ny fanaintainana sy ny fijaliana, na dia mandritra ny minitra vitsivitsy monja aza .
Mamela ny fametrahana fanehoan-kevitra ao amin'ny kaontin'ny ankizy ny tranonkala ary maro tamin'ireo fanehoan-kevitra avy amin'ireo ankizy manokana, na avy amin'ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviana hafa no manolotra fisaorana noho ireo karatra, taratasy, ary entana izay tonga avy any Azia sy Aostralia.
Hoy i Natalia, 11 taona, voan'ny fibrose kystique, tao amin'ny horirantavany :
Vizana aho ka handeha hatory amin'izay ary raha afaka aho rahampitso dia hitsidika ny tranonkala ihany koa . Hanome ny tsikiko aho, ary toy ny mahazatra dia hivavaka aho amin'ny hariva mba hisaotra an'Andriamanitra noho ny aminareo rehetra … Tafandria mandry ry namako nofinofy.
Hoy ny renin'i Natalia tao amin'ny lahatsoratra an-gazety:
Nanova ny zanakay vavy ny Dream Mail. Nahazo taratasy mahafinaritra, fanomezana, sary maro izy ary nahazo namana vaovao maro. Nahatonga azy ho sambatra kokoa izany rehetra izany ary lasa manam-paharetana kokoa izy amin'ny fitsaboana ataony.
Nahazo fahombiazana lehibe hatramin'izao ny fanentanana ary tsy ny olon-tsotra ihany no mandray anjara amin'izany fa ny toeram-pianarana ihany koa, ahitana sekoly miisa roanjato sy akanin-jaza mandray anjara amin'izao fotoana izao. Misy amin'ireo ankizy no nahazo taratasy sy karatra paositaly hatramin'ny 400 isa Izany no mahatonga ireo tsiky an'arivony ary manaporofo fa manan-danja eo amin'ny fiainana ny zavatra madinika.
Azonao atao ny mitsidika ny Dream Mail ao amin'ny www.marzycielskapoczta.pl na manatevin-daharana ny fanentanana ao amin'ny Facebook.